श्रमको मूल्यमा राज्य उदासिनता - Pradesh Today
Homeविचारश्रमको मूल्यमा राज्य उदासिनता
श्रमको मूल्यमा राज्य उदासिनता
हरेक वर्ष मार्च ८ तारिकका दिन अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउने गरिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको एक शताब्दी पूरा हुनै लाग्दा महिला श्रमिकका समस्या खासै परिवर्तन हुन सकेका छैनन् ।
नेपालमा महिला श्रमिकका विषयमा कानुन बनेपनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । विगतदेखि नै महिला र पुरूषको समान काममा समान सहभागिता हुन सकेको छैन् ।
संघीय व्यवस्थासँगै महिला श्रमिकका कुरा कानुनमा फराकिलो रूपमा उल्लेख भएको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न भने सकस नै हुने गरेको छ । महिलालाई काममा लगाउने मालिकदेखि कानुन कार्यान्वयन गराउने राज्य गम्भीर हुन नसक्दा महिला श्रमिकले वर्षौदेखि समस्या झेल्नुपरेको छ ।
मार्च ८ मा महिला श्रमिकका कुरा बहसमा आउने गरेपनि विस्तारै भुल्ने गरिएको छ । महिला रोकिए संसार रोकिन्छ भनिन्छ तर महिला अधिकारका कुरा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् ।
महिला श्रमिकको समस्या पहिचान गरी उनीहरूको अधिकार रक्षाका लागि के हुन सक्छ ? महिलामा श्रमिकमा के समस्या छन् होला ? लगायतका विषयमा सरोकारवालाहरूसँग प्रदेश टुडेको नियमित स्तम्भ राउण्ड टेबलमा कुराकानी गरेका छौं ।
नेपाली श्रम बजारमा महिलाहरू समस्या थुप्रै छन् । राज्यले महिला श्रमिकका अधिकारलाई फराकिलो बनाएपनि कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ ।
मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवस मनाउन शुरू गरेको लामो समय बितिसकेको छ । सरकारले यो दिवसलाई पछिल्लो समय प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । मार्च ८ का दिन मनाइने नारी दिवस राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनबाट सुरू भएको इतिहास छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय संविधानले नै गरेको व्यवस्थाका कारण महिलाअधिकारको विषय सशक्त रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ ।
संघीय संरचनामा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका संरचनामा प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक महिला हुनैपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाले राज्यका सबै निकायमा महिलाको पहुँच पु¥याएको छ । महिलाका लागि संविधानले नै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकलगायतका मौलिकहरूको प्रत्याभूति गरेको छ ।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्र प्रमुखजस्तो महत्वपूर्ण पदमा महिला रहेको विश्वका केही सीमित मुलुकहरूको सूचीमा नेपालले आफूलाई उभ्याउँदै आएको छ ।
सन् १९०८ को मार्च ८ का दिन अमेरिकाको एउटा कपडा कारखानामा काम गर्ने महिलाहरू आफूमाथि भएको शोषण, असमान ज्याला र पुरूषले भन्दा धेरै समय काम गर्नुपरेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिए ।
त्यो आन्दोलनको प्रेरणामा विश्वका विभिन्न मुलुकका महिलाहरूको दुई वर्षपछि डेनमार्कको कोपेनहेगनमा सम्मेलन भयो । कोपेनहेगन सम्मेलनले गरेको निर्णय अनुसार सन् १९११ देखि मार्च ८ लाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला श्रमिक दिवसको रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
अब अहिले नेपालमा श्रमिक महिलाका कुरा गर्नुपर्दा खेरी राज्यले व्यवस्था गरेअनुरूप व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् ।
राज्यले त महिला श्रमिकको ज्याला तोकेको छ तर व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन् । महिलाले समान ज्याला पाउन नसक्नु भनेको नै मालिकबाट शोषित पीडित छन् महिला भन्ने बुझ्ने नै हो ।
महिलाको सीप र दक्षताअनुसार ज्याला मालिकले व्यवस्था गर्न नकिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर श्रमिक महिला नै यौन हिंसाको शिकार भइरहेको पाइन्छ । श्रममा लाग्ने महिला सहकर्मी पुरूषबाटै होस्, मालिकबाट होस्, यौन हिंसामा पर्ने गरेका छन् ।
कलकारखानादेखि सरकारी कार्यालयमामा किन नहोस्, श्रमिक महिलाले सास्ती पाउनुपर्ने अवस्था छ । श्रमको सही मूल्याङ्कन हुन नसक्दा महिलाहरू पीडित पनि छन् । महिला अधिकारका लागि कानुन बनेका छन्, कार्यान्वयनमा चुनौती देखिने गरेको छ ।
महिलाको ज्यालामै विभेद हुने गरेको छ । सरकारले श्रमिक महिलाको ज्यालामा ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ । महिलाको सिप, कला अनुसार नै श्रमको मूल्य सरकारले ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
महिलाका मुद्दालाई अलि गम्भीर रूपमा लिएर सरकारले पहलकदमी चाल्न सक्नुपर्छ । सरकारले श्रमको मूल्यको ग्यारेन्टी गरेपछि अनिवार्य पालना गर्न गराउनुपर्छ ।
अनि महिला श्रमिकले सुरक्षित महशुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ । होटलमा काम गर्ने महिला होस् कि संघ, संस्था कार्यालयमा काम गर्ने महिला होस्, अथवा राजनैतिक दलमा महिलाले सुरक्षित महशुस गर्नुपर्छ ।
अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा त्यस्तो छैन् । कम्युनिष्ट सरकारको पालामा पनि महिला कामदारले सुरक्षित महशुस गर्न नसकिरहेको अवस्था छ ।